Eden Hazard oo qof walba ka yaabsaday markii kulankiisii ugu horreeyey ee kooxda Real Madrid uu ka soo muuqday isagoo xiran lambar 50!… (Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
Eden Hazard oo qof walba ka yaabsaday markii kulankiisii ugu horreeyey ee kooxda Real Madrid uu ka soo muuqday isagoo xiran lambar 50!… (Maxay tahay sababtu?)
(Madrid) 21 Luulyo 2019. Laacibka cusub ee kooxda Real Madrid, Eden Hazard ayaa kulankiisii ugu horreeyay ee naadigiisa reer Spain waxa uu xirtay funaanad dhabarka ku leh lambar 50, taasoo dad badan ka yaabisay.
Kulanka uu ka soo muuqday xiddigan reer Belgium oo ahaa mid saaxiibtinnimo ayaa kooxdiisa Real Madrid looga adkaaday 3-1, waxaana saddexda gool naadiga reer Jarmal u dhaliyey Corentin Tolisso, Robert Lewandowski iyo Serge Gnabry, halka saxiixa cusub ee Los Blancos ee Rydrgo uu dhaliyay goolka qura ee Real Madrid kulankan.
Eden Hazard ayaan weli si rasmi ah lambar loo siinin, waxaana xanta lagu hayaa inuu qaadanayo lambarka 23-aad oo uu horay u soo xirtay David Beckham markii uu joogay Los Blancos, lambarkaasoo uu sidoo kale xiran jiray halyeeyga kubadda Kolayga ee Michael Jordan oo uu Hazard taageero weyn u ahaa.
Hazard ayaa lambarkaasi 50-aad ee uu xirtay xalay kaga gol lahaa maadaama ay shalay ku beegnayd sanad guuradii 50-aad ee ka soo wareegatay markii dayac gacmeedkii Apollo 11 iyo cirbixiyeen Neil Armstrong uu ku dul degay dayaxa dushiisa 20-kii bishii July sanadkii 1969-kii.
Xiddigga reer Belgium ee Hazard ayaanan waqti xaadirkan heli karin lambarka 7-aad ee Real Madrid, maadaama uu wato Mariano Diaz, illaa uu kooxda ka tago Diaz ciyaaryahan Hazard ayaan heli doonin lambarkii hore ee CR7.
Si kastaba ha haatee, Eden Hazard ayaa horay lambarka 10-aad si kaftan ah u weydiistay Luka Modric, hase yeeshee laacibka reer Croatia waa uu diiday sida uu shaaca ka qaaday Hazard.
Dad badan ayaa la yaabay markii ay arkeen xalay Hazard oo xiran lambarka 50-aad ee kooxda Real Madrid, laakiin laacibka reer Belgium ayaan lambarkaas si rasmi ah ugu xiran doonin kooxda Los Blancos, iyadoo rasmi loo shaacin doono lambarka uu u qaadan doono kooxda ka dhisan caasimadda Spain.
Sidee ayay u muuqan kartaa Shaxda kooxda Man United xilli ciyaareedka cusub haddii ay la soo wareegto Gareth Bale, Bruno Fernandes & Harry Maguire?
WARBIXIN: Sidee ayey ula tacaalaan gabdhaha kubadda cagta wakhtiga caadada!?